कांग्रेस आफ्नै कारणले हारेको हो : आनन्दप्रसाद ढुंगाना
० काँग्रेस भित्रको विवाद अहिले चरमोत्कर्षमा पुगेको हो ?
— कांँग्रेस भनेको लोकतान्त्रिक पार्टी हो । लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र स्वाभाविक रूपमा आ–आफ्ना विचारमा भिन्नता हुन्छ नै । त्यसैले कांँग्रेसभित्र जुन किसिमका विचार र भिन्नताहरू देखिएको हो, त्यसलाई विवाद ठान्नु हुँदैन । विविधताकाु बीचमा एकता हो । हामी हरेक कुरामा छलफल गर्छौं र हरेक कुरामा आ–आफ्ना विचार राख्छौं । ती सबैलाई हामीले स्वीकार गरेर हिंड्नुपर्छ । यसलाई विवादको रूपमा नलिई विचारको मन्थनको रूपमा लिनुपर्छ । यसबाट जुन निक्र्योल आउँछ त्यो नै हाम्रो धारणा हुन्छ ।
० त्यसोभए, विवाद छैन अहिले ?
— पार्टीभित्र उठेका विभिन्न विचारलाई कसरी मिलाउने, जनताका बीचमा कसरी जाने, पार्टीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त्यसकै बारेमा हामीले छलफलमा थालेका हौं । त्यो छलफलको हामी निक्र्योल पनि गरिसकेका छौं । हामीले जिल्ला सभापतिहरूको सम्मेलन र महासमितिको बैठक बसाएर नीतिगत निर्णय लिन्छौं र त्यहीं नीतिगत निर्णयअन्तर्गत हामी अगाडि बढ्छौं ।
० विभिन्न गुट–उपगुटमा विभाजित पार्टी भित्रको समस्या हल गर्न सजिलो छ ?
— लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र त गुट–उपगुट हुन्छ नै । कांग्रेसमा कहिले विचार राखेर गुट बनेको थिएन ? तर, ती सम्पूर्ण हुँदाहुँदै पनि किन राजनीतिको नियोग बसेर बस्यो, सधैंभरि नेपालको इतिहासमा ? त्यसैले यो गुट–उपगुट होइन, स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्र रहेर आफ्नो विचार समावेश गराउन खोज्छ । त्यसमा कतिपय विचार समावेश हुन्छ, कतिपय समावेश हुँदैन, त्यो गुट–उपगुट जस्तो देखिन्छ । त्यो गुट होइन, लोकतान्त्रिक पार्टीको सुन्दरतम् चरित्र हो । त्यसैले यसलाई गुट–उपगुट नमान्न मेरो अनुरोध छ ।
० रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण प्रसाद सिटौला, गगन थापाहरूका विरोधका स्वरलाई कसरी साम्य पार्न सकिन्छ ?
— तपाइँले जुन साथीहरूको नाम लिनुभयो, उहाँहरू हिजोसम्म त्रिपक्षीय गुटमा थिए, आज द्विपक्षीयमा पुगेका छन् । विचारमा मन्थन हुँदाहुँदै आज दुई गुटमा देखिएको छ । अहिले भर्खर केन्द्रीय समितिले जुन दस्तावेजहरू पास गरेको छ, त्यसले के भन्छ भने कांग्रेसमा कमी कमजोरी हामी सबैमा रह्यो । हामी यी सबै कमी कमजोरीका बाबजुद जुन किसिमले काँंग्रेसको विरूद्धमा एउटा वाम गठबन्धन बन्यो त्यो नै चुनावको हारको कारण हो भनेर दस्तावेजमा लेखेका छौं । हामीले अहिले पनि अत्तालिनु हुँदैन । हामी सधैं यस्ता परिस्थितिहरूको सामना गर्दै आएका हौं । कांग्रेसभित्र जुन किसिमको अन्तद्र्वन्द्व देखिएको छ त्यो अन्तद्र्वन्द्व होइन, विचारको मन्थन हो । लोकतान्त्रिक पार्टीमा जुन चरित्र हुन्छ, त्यो चरित्र देखिएको छ । यसलाई हामीले अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन ।
० पार्टीभित्र जुन विरोध देखिएको छ त्यो विरोधका लागि मात्र हो कि त्यसमा तर्क पनि छ ?
— हैन, हैन । त्यो विरोधहरू होइन, आफ्ना विचारहरू सम्बोधन गराउन खोजिएको हो । एउटै विचारले मात्र लोकतान्त्रिक पार्टी चल्दैन । विचार सम्बोधन गराउन खोज्दै गर्दा स्वाभाविक रूपमा विभिन्न विचारहरू अगाडि सरेका छन् । यसलाई निक्र्योल गरेर केन्द्रीय समितिले जनताको अगाडि ल्याएको छ, त्यहीं नै हाम्रो अन्तिम निर्णय हो ।
० तपार्ईंलाई लाग्दैन पार्टी नेतृत्वले नै उनीहरूको विचार सुन्न छाडे पछि विवाद खडा भएको हो ?
— पार्टी नेतृत्वले उनीहरूको विचार नसुनेको भए यत्रो लामो समय (चैत ९ गतेदेखि बैशाख १६ गते) सम्म केन्द्रीय समितिको बैठक चल्ने नै थिएन । विभिन्न कारणले हाम्रा बैठकहरू बस्न सकेन । हाम्रो महामन्त्रीको दस्तावेज हेर्नुभयो भने उहाँले प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ कि हामी संस्थागत शक्तिमा विश्वास गर्छौं, संस्थागत रूपमा पार्टी चलोस् भन्ने चाहन्छौं । संस्थागत रूपमा पार्टी चलाउनका लागि हामी आ–आफ्ना विचार प्रकट गर्छौं । त्यो विचार प्रकट गर्दै गर्दा गुटको आधारमा प्रकट गरिएको भन्ने ठान्नु हुँदैन । सबै साथीहरूले बोल्दा यही कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । त्यसैले, कोही पनि कांग्रेसमा विवाद छ भनेर भ्रममा नपरोस् । कांग्रेसमा विचारमा भिन्नता सधैंभरि देखिएको छ, तर निक्र्योल गर्दा सबै पक्षमा नै रहने गरेका छन् । त्यसैले कांग्रेसले सधैंभरि यो देशको राजनीतिमा एउटा मियोको रूपमा रहँदै आएको छ । जबसम्म कांग्रेसले नेतृत्व गरेन तबसम्म यो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएन । अहिले पनि कांग्रेसले जबसम्म आफ्नो अभिव्यक्ति प्रकट गर्दैन तबसम्म समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्नु बेकार हुन्छ । कांग्रेसकै भावनाअनुसार देश चल्दै आएको छ ।
० निर्वाचन सम्पन्न भएको चार महिनाभन्दा बढी समयपछि कांग्रेसले निर्वाचनको समीक्षा गरेको, यो कस्तो प्रजातान्त्रिक दल हो ?
— निर्वाचन सकिएलगत्तै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, राष्ट्रपतिको निर्वाचन, सभामुख निर्वाचन भयो । दलगत राजनीतिको हामी विचार लिएर बढ्छौं भने त्यसमा हाम्रा नेताहरू अल्झनुपर्ने परिस्थितिको कारण समीक्षा बैठक अलि ढिलो भएकै हो । चैत ९ गतेदेखि बैशाख १६ गतेसम्म हामीले समीक्षा बैठकमा आफ्ना विचार व्यक्त गरेका छौं । त्यो विचारले एउटा निक्र्योलमा पुगेका छौं । त्यसकारणले ढिलो भए पनि ‘देर आया दुरूस्त आया’ जस्तै कांग्रेस अहिले आएको छ ।
० निर्वाचनको पराजयबाट पार्टीले पाठ सिक्ने कि आफ्नो हारको दोष अरूलाई दिने ?
— कांग्रेसले पराजयको दोष कसैमाथि थुपारेको छैन । नेपालको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसले धेरै पाठहरू सिकेको छ । नेपाली कांग्रेसले २००७ सालको परिवर्तनपछि संविधानसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्दा विभिन्न षड्यन्त्रवश त्यो बेला हुनसकेन र संसद्को निर्वाचनमा जानुप¥यो । संसद्को निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत पाइसकेपछि सेनाको बलमा नेपाली कांग्रेसलाई अपदस्थ गराउँदा हामी आतिएनौं । हामी लडिराख्यौं । त्यसपछि पनि विभिन्न षड्यन्त्र भएकै कारणले २०४६ सालको संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन । मुलुकको हरेक परिवर्तनको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरेको हो । अहिलेको निर्वाचन परिणामबाट कांग्रेस आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन । कांग्रेस हारेको होला तर देश, जनता, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र हारेको छैन । त्यसैले कांग्रेस यो कुरामा खुशी छ ।
० काँगेस आफ्नै कारणले हारेको कि वाम गठबन्धनको कारणले ?
— कांग्रेस विभिन्न कारणले हारेको हो । वाम गठबन्धन नै कारण हो भन्न सकिन्न । किनभने २०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा के कारणले हा¥यो, २०५१ को निर्वाचन के कारणले हा¥यो ? त्यसैले वाम गठबन्धन नै कारण हो कसरी भन्ने । विभिन्न कारणहरू छन् । २०७० को निर्वाचनमा कांग्रेस ठूलो पार्टी बन्यो । २०६४ को निर्वाचनमा कांग्रेस हारिसकेपछि चार–चार जना वामपन्थी प्रधानमन्त्री हुनुभयो तर संविधान बन्न सकेन । त्यसैले २०७० को निर्वाचनमा जनताले के बुझे भने अब कांग्रेसलाई नेतृत्व गर्न दिएनौं भने लोकतान्त्रिक संविधान लेखिँदैन भनेर कांग्रेसलाई मत दिए । कांग्रेसले जनताको विचारलाई बोकेर हिंडेकोले जित्छ । अहिले कांग्रेसले जनताको विचार बोक्न सकेन होला । कांग्रेसले आफूले गरेका कामहरू जनता अगाडि पस्कन सकेन होला । त्यसकारणले कांग्रेस हारेको होला । तर, आगामी निर्वाचन कांग्रेसकै पक्षमा हुन्छ । यसकारणले कि जबसम्म यो देशमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्दैन तबसम्म समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्नु बेकार हुन्छ ।
० पार्टी नेतृत्वको धेरै आलोचना भइरहको छ । तपाईलाई के लाग्छ नेतृत्वले कमजोरी गरेकै हो ?
— स्वाभाविक रूपमा घरका जो मूली हुन्छ उससँग सबैले अपेक्षा राखेका हुन्छन् । घरका मूलीले सबैलाई खुशी पार्न सक्छन् भन्ने छैन नि । त्यसैले नेताका रूपमा स्वाभाविक रूपमा सबैले आ–आफ्ना गुनासाहरू राख्छन् । यसलाई नेताले पनि अस्वाभाविक लिनु हुँदैन र हामी कार्यकर्ताले पनि त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । त्यसकारणले नेताकै कारणले चुनाव हा¥यो भन्ने कुरा मान्न सकिँदैन । कमजोरी नेतृत्वको मात्रै होइन, शीर्ष नेतादेखि तल्लो तहसम्मका नेता कार्यकर्ताहरूको पनि कमजोरी हो ।
० विशेष महाधिवेशनको सम्भावना कति छ ?
— विशेष महाधिवेशनको कुरा सकियो । जेष्ठका अन्तिममा जिल्ला सभापतिहरूको भेला हुन्छ, त्यसपछि महासमिति हुन्छ र जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले गरेको निर्णय र सुझावलाई महासमितिसम्म लैजान्छौं । अहिले केन्द्रीय समितिले पनि गरेको निर्णय महासमितिसम्म लैजान्छौं, विधान संशोधन गर्छौं । त्यसपछि कांग्रेसको नीति अगाडि बढ्छ ।
० कांग्रेसको आगामी कार्यदिशा के हुने ?
— कांग्रेसको कार्यदिशा भनेको अब हामी महासमितिबाट विधान संशोधन गरेर कांग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा मियो हो, सम्पूर्ण परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो भन्ने मूल आधार बनाएर अगाडि बढाउँछौं ।
० कांग्रेसले अब मुख्य प्रतिपक्षीको भूमिका कसरी निर्वाह गर्छ ?
— कांग्रेस विगतमा पनि सत्ता हुँदा वा विपक्षमा हुँदा कहिल्यै पनि नकारात्मक कार्य गरेन र गर्दैन । सरकारले राम्रो काम ग¥यो भने कांग्रेसले सहयोग गर्छ वा नराम्रो कार्य ग¥यो भने विरोध गर्छ । अहिलेको संविधान विपरीत कुनै पनि क्रियाकलाप सरकारले ग¥यो भने कांग्रेसले सहँदैन । कांग्रेस जसरी लामो समयसम्म राणासँग लड्यो, राजासँग लड्यो, पञ्चायतसँग लड्यो त्यस्तै लड्नका लागि तयार हुन्छ । लोकतन्त्रको विरूद्धमा यदि कुनै पनि शासनसत्ता गयो भने हामी सहन सक्दैनौं ।